Iskaashi la leh Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah - Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Shuraako la ah Equal Access International
Shuraakaduhu waxay udub dhexaad u yihiin shaqada isbedelka nolosha aan sameyno. Haddii aad tahay dowlad, ganacsi, ama fac, iskaashi lala yeesho EAI wuxuu kuu suurtagelinayaa inaad ku dhiirrigeliso xalal xiiso iyo hal-abuurnimo leh bulshooyinka adduunka oo dhan. Hoos nagala soo xiriir!
FURSADO CUSUB OO LA HELI KARO
Codsiga Soo-jeedinta: Adeegyada Hantidhowrka ee Sinnaanta Helitaanka Caalamiga - Bariga Afrika. Wakhtiga kama dambaysta ah waxaa lagu kordhiyay Febraayo 26, 2021. Waxbadan ka baro halkan: RFP_001_ Hanti Dhowrka Kenya
Codsiga Soo-jeedinta: Codbixinta IVR ee arrimaha COVID-19 iyo arrimaha CVE ee Côte d'Ivoire. Wakhtiga kama dambaysta ah waxaa lagu kordhiyay Febraayo 28, 2021. Waxbadan ka baro halkan: RFP Côte d'Ivoire IVR Codbixinta
Jawaabaha Su'aalaha ku saabsan Côte d'Ivoire ICR Codbixinta oo laga heli karo halkan: Jawaabaha
Dowladda iyo Iskaashiga Dhinacyada Badan
18-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan u saamaxnay dowladda iyo la-hawlgalayaasha dhinacyada badan ee adduunka in ay ku guuleystaan ​​himilooyinkooda horumarineed iyadoo la adeegsanayo hanaankeenna horumarineed ee aadanaha ku saleysan si wax looga qabto arrimaha muhiimka u ah dhismaha nabadda iyo ka hortagga xag-jirnimada rabshadaha wata (CVE), sinnaanta jinsiga, iyo maamulka iyo bulshada hawlgelinta. Waxaa nagu taageeray aqoonteena ballaadhan ee u hogaansanaanta iyo siyaasadaha nidaaminta ee UN, USG iyo wadamada kale ee deeqaha bixiya iyo diiwaanka raadraaca cillad la'aanta mas'uuliyadda maaliyadeed, waxaan nahay saaxiibo lagu kalsoon yahay hay'adaha horumarinta adduunka ugu waaweyn maadaama ay ka shaqeeyaan qaar ka mid ah kuwa ugu adag in la gaaro gobollada. adduunka. Fadlan la xiriir Catherine Scott, Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga, ee cscott@equalaccess.org si loo baaro iskaashi.
Shirkadaha iyo Aasaaska
Waxaan si sharaf leh u shuraako la nahay shirkadaha iyo aasaaska u heellan nabad-dhisidda, sinnaanta lamaanaha, la xisaabtanka dowladda, iyo ka qeyb qaadashada bulshada si aan u bilowno barnaamijyo saameyn leh, hal abuur leh. Waxaan la jaanqaadeynaa qaabkeena, khibradeena iyo gaar ahaan juqraafi ahaan ujeedadaada ganacsi annaga oo hubineyna in soo laabashada maalgelinta barnaamijyada aan horumarinno. Hay'aduhu waxay aamminsan yihiin EAI inay noqoto hay'ad karti leh oo ay hoggaamiso barasho iyo la qabsi si ay yoolalka ugu muhiimsan ee nolosha barnaamijyo ugu soo qaadato. Iyada oo loo marayo iskaashi lala yeesho EAI, aasaaska ayaa la gaarsiyaa bulshada oo loo dhaqaajiyaa cirbadaha arrimaha xasaasiga ah. Shirkaduhu waxay tijaabiyaan badeecada iyo adeegyada cusub ee bay'adaha gaarka ah si ay u sahamiyaan sida ugu wanaagsan ee loo qiyaaso badeecada, kor loogu qaado awooda shaqaalaha loona xajiyo kartida. Fadlan la xiriir Catherine Scott, Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga, at cscott@equalaccess.org si looga baaraandego iskaashi.
Asxaabta, Ganacsiga Yar yar iyo Machadyada Tacliinta
Waxaan soo dhaweyneynaa iskaashiga lala yeesho asxaabta, ganacsatada yar yar iyo machadyada waxbarasho ee adduunka si loo fududeeyo barnaamijyo saameyn ku leh bulshada ku saleysan wax ka qabashada arrimaha muhiimka ah ee deg degga ah. Fadlan nala soo xiriir halkan.
Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno!